SomaliTalk.com » Nairobi
Home » Qoraallada Halkudhegga "Nairobi"
NAIROBI: Qoraal uu qoray safiirka UK ee Somalia British Ambassador to Somalia, Nairobi starts Ma tahay sanad-guuro ka farxad badan kuwii hore? Luuliyo 2, 2012 Waxaan u socdaaley Rooma, si aan uga qaybgalo shirka 22aad ee Kooxda Caalamiga ah ee Xiriirka Soomaaliya, halkaan oo anniga iyo saaxiibbo aan wada shaqeyno oo ka socda London iyo Xafiiska Dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya waxaa aan ku biiri...
Halkudheg: Nairobi, uk
Warar Is-khilaafsan oo ka soo baxaya Qarax aad u Xoogan oo ka dhacay Nairobi Kenya
Wararka ka imanaya Kenya ayaa qaarkood tibaaxeen in qaraxii Isniintii ka dhacay Nairobi ay sababtay koronto oo uusan ahayn bombaano. Dhanka kale warar kale ayaa sheegay in uu ahaa qarax bambaano. Booliska Kenya waxay sheegeen in qaraxaas ay sababtay Korontada ama fiilooyin koronto o qarxay. Ra’iisul wasaaraha Kenya Odinga ayaa isagu shegay in aysan u dul qaadanayn kuwa qaraxa geystey oo laynaya...